Wholesale Wire harato mpanamboatra sy orinasa | Huiling
Fitaovana tariby vy ambany karbaona, tariby nandrisika, tariby mifono PVC Vidiny FOB Tianjin: $ 8.8-25.5usd / set
Diameter tariby 3.0mm-6mm
Haben'ny haben'ny 50 × 100,50x200mm, 60x200mm, ho fangatahanao
Haavo / sakany Haavo 1.0-2.0m, 1.5-2.5m Sakany
Fitsaboana ambonin'ny tany Nandrisika, coating PVC
1) Lahatsoratra fefy vita amin'ny fandrarahana beton, miaraka amin'ny vidiny mirary.
2) Hery lehibe, fitoniana tsara amin'ny ankapobeny.
3) Ny sosona plastika miloko dia misy fiantraikany tsara amin'ny fanoherana ny harafesina sy haingon-trano.
4) Ny perimeter perimeter dia manana firindrana sy fomba fijery tsara.
Teo aloha: Cages / Cages fandrika